Nagarik Shukrabar - कसरी बढाउने यौन क्षमता ?
शनिबार, २४ साउन २०७७, ०८ : ४०
कसरी बढाउने यौन क्षमता ?
बिहिबार, ०३ माघ २०७५, ०८ : ५९ | शुक्रवार
बुढेसकालमा यौन दुर्बलता हुनु स्वाभाविकै हो । बुढेसकालमा यौन चाहना हुने भए पनि यौन शक्ति कम हुँदै जान्छ । युवाअवस्थामै यौन दुर्बलता हुनु समस्या हो ।
व्यक्तिको तल्लो थालामस, पिट्युटरी ग्रन्थी र लक्षित अंगमा असर गर्ने हर्मनको ठूलो भूमिका हुन्छ । साधारण अवस्थामा यसले यौन उत्कर्षमा पुग्नलाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ । महिला र पुरुषको एन्ड्रोजिन हर्मनको निशेचनमा गडबढी भयो भने यौन शक्तिमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । विभिन्न औषधि तथा दुव्र्यसनीका कारणले पनि यौन शक्तिमा कमी आउँछ ।
दैनिक ५÷७ पटक र एक पटकमा ४०÷५० पटक गुदद्वारको मांसपेशी खुम्च्याउने र फुलाउने गर्नाले यौन शक्ति बढ्छ । एक पटकमा लगातार दुई सयपटक यो व्यायाम गर्दा पनि कुनै किसिमको हानि हुँदैन । बरु अति फाइदा हुन्छ । गुदद्वारको मांसपेशीको व्यायामले महिलामा यौन क्रिडा शक्ति र कामोत्तेजना बढाउँछ भने पुरुषमा शीघ्र स्खलनबाट छुट्कारा पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो व्यायामले लामो समयसम्म यौन क्रिडा गर्न मद्दत पु¥याउँछ । यौन शक्ति बढाउन यस्तो व्यायाम दैनिक गरिरहनु पर्छ ।
याैन सम्बन्धी कुनै समस्या भए infoshukrabar@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ ।